Ukuhlukunyezwa komjikelezo wesisodwa kungenye yezifo ezivame ukuhlukunyezwa futhi kuhlupheka cishe nantombazane yesibili. Zonke izinqubo ze-hormone emzimbeni wesifazane zilawulwa yizindawo ezimbili zobuchopho: i-pituitary ne-hypothalamus.
Lolu hlelo lulawula ukusebenza okujwayelekile kwesibeletho nama-ovari. Ku-hypothalamus, kunezinto ezikhethekile ezakhiwa ukuthi zifake i-pituitary gland futhi zenze inqubo ye-hormone synthesis. Ngokugeleza kwegazi, kufinyelela kuma-ovaries, lapho ukukhiqizwa kwama-hormone e-sex kuqala khona - i-progesterone, i-estrogen kanye nengxenye encane ye-androgens, eyenza inqubo yokulungiselela isibeletho nama-ovari ukuze kukhule. Kule ndlela yokulawula okuyinkimbinkimbi, ukwehluleka kungenzeka, okuholela ekuphukeni komjikelezo wokuya esikhathini. Isizathu singase sibe ukuphazamiseka kwe-hormonal okwenzeka emzimbeni wesifazane, ukungabi namavithamini, izifo ezithathelwanayo, ukuhlukunyezwa okuhlukahlukene kwengqondo. Ukuphulwa komjikelezo wokuya esikhathini kwentombazane kuvame ukuhambisana nokusetshenziswa kwezidlo ezihlukahlukene. Ngokuphishekela isibalo esincane kakhulu, amantombazane azithola esesimweni sokudla esivamile, imikhawulo eminingi yokudla igcina isidumbu samavithamini abalulekile kakhulu, okungaholela ekusebenziseni ukungasebenzi nokuhlukunyezwa komjikelezo wokuya esikhathini. Ukulahlekelwa kwesisindo samaphesenti angu-15 kungaholela ekuqedeni okuphelele kokuya esikhathini.
Izimpawu zingase zibe ziningi kakhulu noma zingabi naso isikhathi sokuya esikhathini, umjikelezo ongavamile, ukuya esikhathini, ukuhambisana nosizi olunzima, ukubambezeleka kokuya esikhathini. Isikhathi sokuya esikhathini singashintshwa izinsuku ezimbalwa. Ubude obuncane bomjikelezo buyizinsuku ezingu-21, ubuningi - izinsuku ezingu-33. Uma kunokulibaziseka kwamasonto angaphezu kwama-2, lo mkhuba wezokwelapha ubizwa ngokuthi i-oligoovulation (i-ovulation engavamile). Ukunyuka okusheshayo okuzayo nyangazonke futhi kuphula umthetho wokuya esikhathini. Uma owesifazane ohlala ehamba esikhathini esizayo ngokuzumayo ekwandisa noma ekwehliseni izinsuku zokujikeleza, lokhu kuyinkinga enkulu futhi kuyadingeka ukuba uye ku-gynecologist.
Izizathu zokuthi kungani intombazane ingaba nokungahambi kahle emjikelezweni wokuya esikhathini ingahluka kakhulu. Isizathu esivame kakhulu ukutheleleka nezifo ezihlukahlukene ezithombeni zomzimba. Ngakho-ke, okokuqala, intombazane ehlushwa ukuphulwa komjikelezo idinga ukuhlolwa futhi ihlolwe ukuba khona kwe-agent (chlamydia, mycoplasma, ne-uroplasm). Uma inkinga yokwephulwa komjikelezo iyancishiswa ukuba khona kwezifo, ukwelashwa okulwa nokuvuvukala okwesikhashana kuzokusiza ukuqeda lezi zinkinga. Ukushintsha isizinda se-hormonal emzimbeni wesifazane kungabangela nokuhlukunyezwa okuhlukahlukene emisebenzini yezitho zomzimba. Okokuqala, izinga lama-hormone lihlolwe, lihlolwe ukuthi ngabe kukhona yini ushintsho ekusebenzeni kwe-grenal adrenal, igciwane le-thyroid liyaphenywa - kaningi, ngenxa yokunciphisa umsebenzi walo noma ngokuphambene nalokho, umsebenzi ophakeme ungabangela izinkinga esikhathini sokuya esikhathini. Izifo ezihlehlisiwe, ezifana ne-rubella nezinkukhu, zingathinta ukuthuthukiswa kwezintambo ezinama-ovari, ukwephulwa okunjalo komjikelezo wesimiso, kwenzeka kakade kusukela emjikelezweni wokuqala wokuqala kokuya esikhathini. Ngokuvamile amantombazane angayinaki lezi zinkinga, futhi le nkinga itholakele kamuva. Ukucindezeleka okunamandla nezimo ezicindezelayo kungathinta ukungasebenzi komsebenzi wesifazane wobulili. Inendima ebalulekile ekuthuthukiseni ukuphazamiseka komjikelezo idlalwe ubufebe, uma le nkinga ibhekene nabesifazane emgqeni womama, kungenzeka ukuthi ifa layo. Ukushintsha izimo zezulu, kungabangela ukwephulwa komjikelezo wokuya esikhathini. Ukuqeqeshwa okunamandla kakhulu nokudla okunomkhawulo kungabangela ukwehluleka komjikelezo. Ukulawula okuphelele, ukudla okuphansi kwekhalori, ukungabi nalutho kwezakhi namavithamini, kungaholela ezinkingeni ezihambisana nokuya esikhathini. Izifo ezidluliselwa ngocansi ziholela ezinkampanini zokuvuvukala, okungazange zithole ukwelashwa kungekudala. Ukudakwa ngokweqile komzimba, okuhlobene nokusebenzisa utshwala, i-nicotine nezinto ezidakayo, kuphazamisa umsebenzi olawula ubuchopho, futhi kungaholela ekuphukeni komjikelezo wokuya esikhathini.
Ukuze ubuyisele ukusebenza okujwayelekile kokuya esikhathini, kubalulekile ukukhomba izimbangela zayo zangempela futhi uqale kuzo ukuqala ukwelashwa.
Ukuze kutholakale ukwephulwa komjikelezo wokuya esikhathini, kunezindlela ze-laboratory nezinsimbi. Ukulethwa kwegazi kuze kube sezingeni lama-hormone wesifazane wesifazane, i-ultrasound yezitho zangasese, ukucacisa isimo sezitho ze-genitourinary, isimo se-endometrium, nesigaba sokuthuthukiswa kwe-follicles. Ukudweba, ngenhloso yokuthatha ukuhlolwa kwezinto ze-endometrial cells. Imidwebo yebuchopho, ukukhipha ubuhlungu be-tumor of the pituitary noma hypothalamus. Imithi yesimanje inikeza inqubo "ye-hysterosalpinography", lapho okungafani khona okungafani khona kutholakala emgodini we-uterine, futhi ubuciko be-tublopian tubes, ubukhulu be-endometrium, buboniswa kumqapha. Ukwelashwa, okhethwe udokotela, kuncike eminyakeni yobudala, uhlobo lwesifo kanye nezimbangela eziholela ekuthuthukiseni. Ngokuvamile ukwelashwa okuyinhloko kuyi-hormone therapy. Ngemuva kokuqala ukwelashwa ngama-hormone, ukuhlolwa kwesibili kwenziwa. Ngokuvamile, ukwelashwa okulodwa kwe-hormone kukwanele ukuthi imisebenzi yomzimba wesifazane izosebenza ngendlela efanele, uma ukwelashwa kungenayo umphumela, ukwelashwa namahomoni kuphindaphindiwe. I-Vitaminotherapy, ukwelashwa kwesimo se-iron nesifo semithi yamasaka nakho kusetshenziselwa ukwelashwa kokungahambisani nokuya esikhathini.
Uma umjikelezo wesimiso wentombazane, kukhona ukwehluleka nezinkinga, udinga ukubonisana nodokotela wamazinyo, ngoba ukuvakashelwa okungakaze kudokotela kungabangela ekuthuthukiseni ukungabi nabantwana kanye nezinye izifo ezinzima zesisu.
Le mithetho yokudla izokukwenza ube mnandi kakhulu: udinga ukwazi!
Zivikele wena nomndeni wakho ezifweni eziyingozi
Ukubuthwa kwi-Intimate Zone Kwabesifazane: Izimbangela Nezokwelashwa
Isibonakaliso: isifo sikashukela sikhulelwe
Ezinye izindlela zokulwa ne-cellulite
"Ukuhlwa Okusheshayo" kunqume ukuphakamisa izilinganiso ezenzelwe u-Olga Buzovoy
I zokupheka kunazo eziwusizo futhi eziwusizo culinary, zokupheka for bonke
Iqoqo le-chocolate nge-mint rim ne-yogurt
Indlela yokubeka imidwebo eqoshiwe efulethini likaFeng Shui
Umlando we-actress u-Anna Snatkina
Imuphi usuku uRamadan aqala ngalo nokuphela ngo-2016? Iyini isisekelo sokuzila okungcwele?
Ukuhlwithwa kusuka e-feijoa ebusika, izindlela zokupheka ezingcono kakhulu nesithombe